राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शुरु गर्‍यो सहुलियत कर्जा, कति छ व्याज ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २४ पुष २०७५, मंगलवार १६:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सोमबारदेखि सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरु गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको यस बैंकले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा लैजाने बताएको छ ।
सहुलियत कर्जा सुरुवात कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको उपस्थितिमा दुई जनालाई सहुलियत कर्जा दिइएको छ ।
कार्यक्रम शुभारम्भको क्रममा बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव गुरुङले सहुलियत कर्जा कार्यक्रमले उद्यम गर्न चाहने, नवीन सोच भएका युवाका लागि अवसर भएको बताए । ‘उद्यमशीलता विकासमार्फत अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
पहिलो सहुलियत कर्जा काठमाडौं नैकापमा भीमप्रसाद अधिकारी र एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत छात्रा रजनी हायूलाई प्रदान गरिएको छ । अधिकारीले सात लाख रुपैयाँको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।
उनले क्याटरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लिएका थिए । त्यस्तै, लोपोन्मुख जातिकी छात्रा हायूलाई इन्जिनियरिङलाई पाँच लाख रुपैयाँको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा दिइएको हो ।
तपाईलाई पत्यार लाग्छ ? मानिसको हातमा भएको कोठीका कारण उसको हातमा कति पैसा रहन्छ र टिक्दैन भन्ने जान्न सकिन्छ…
पप्पु कन्स्ट्रक्सनलार्इ टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक
काठमाडौं । सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सम्पूर्ण टेण्डर प्रक्रियामा रोक लगाएको छ ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमै काम नसकेको भन्दै कोस्टाल…
एजेन्सी । मलेसियाका पूर्वराजा एवं प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी सुल्तान अहमद शाहको ८८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। पाहाङ राज्यबाट…
माथिल्लो–मर्स्याङ्दी २: खरिद बिक्रीमा संसदीय समितिको चासो
काठमाडौं । संसद्को अर्थ समितिले माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को सेयर बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक,…
राजमार्गका होर्डिङ बोर्ड हटाउन शुरु
भद्रपुरपूर्व। पश्चिम राजमार्ग अतिक्रमण गरी विभिन्न निजी कम्पनी तथा संस्थाबाट राखिएका होर्डिङ बोर्डलगायत प्रचार सामग्री मेचीनगर नगरपालिकाले शुक्रबारदेखि हटाउन…